होली मनाएपछि लिखित सहमति गर्ने नेकपा एमाले र जसपाको संयुक्त सरकार ! – Khabar Patrika Np
होली मनाएपछि लिखित सहमति गर्ने नेकपा एमाले र जसपाको संयुक्त सरकार !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र १२, २०७७ समय: २२:०८:०७
सरकारमा जाने कुरालाई लिएर सकसमा परेको जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा ) र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार बालुवाटारमा संवादमा जुटे।
पटक पटक वार्ता गरेका दुई पक्षबीच हिजो बालुवाटारमा भएको बैठक सहमति नजिक पुगेको छ। सरकारमा जाने विषयमा सहमत जसपाले होली सकिएलगत्तै लिखित सहमति गर्ने भएको छ।
‘बैठकमा पार्टीले उठाउँदै आएको माग तत्कालै पूरा गर्नु भनियो, त्यसपछि सरकारलाई समर्थन गर्छौँ भन्यौँ’, उनले भने, ‘जवाफमा चाँडै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता आयो ।’ बैठकमा जसपाको कार्यदलले पछिल्लो समयको गतिविधिको समेत ब्रिफिङ गरेका थिए ।
नेता कर्णले औपचारिकरुपमा यो प्रतिक्रिया दिए पनि जसपा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच अन्य मुद्दामा पनि छलफल स्रोतको दाबी छ ।